14 | July | 2018 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
July 14, 2018 drkokogyi
Credit – Nay Zin Lat Shared by ShaMin Mdy
မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ​သွေး​နှောလူ့အဖွဲ့အစည်း၂ခုရှိတယ်​။တရုတ်​နဲ့အပနားအုပ်​စု။အဲဒီနှစ်​အုပ်​စုစလုံး မြန်​မာပြည်​စီးပွား​ရေး​လောကမှာ အသီးသီး​နေရာရထားကြတယ်​။ဒါဟာလည်းသူတို့အပြစ်​မဟုတ်​ဘူး။အစိုးရကိုယ်​တိုင်​သူတို့ကို တွန်းပို့လိုက်​တာပါ။ဘာလို့ဆို​တော့ သူတို့အုပ်​စုနှစ်​စုစလုံးကို မြန်​မာအစိုးရက အမျိုးသား​ရေးဆိုတဲ့တစ်​ထွာတစ်​မိုက်​အမြင်​နဲ့ ၀န်​ထမ်းနဲ့နိုင်​ငံ​တော်​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​တဲ့လုပ်​ငန်း​တွေကပယ်​ချလိုက်​တာ​ကြောင့်ပဲ။၀န်​ထမ်းဆိုတာ လခစား။အစိုးရလခပဲစားစား ဘယ်​သူ​ဋ္ဌေးရဲ့ လခပဲစားစား လခစားပဲ။ဒီဘ၀မှအမြဲ​နေရင်​ ၀န်​ထမ်းအဖြစ်​က​နေမတက်​ဘူး။အဲ​တော့အစိုးရက သူတို့ကိုပယ်​တာပဲ။သို့​သော်​ ပယ်​ရာမ​ရောက်​ဘဲ မြင့်တင်​​ပေးသလိုဖြစ်​သွားတယ်​။အသီးသီးအစိုးရဖိနှိပ်​​နေတဲ့ကြားက ကြိုးစားရုန်းကန်​ရှာ​ဖွေကြတာ အကြီးစား အလတ်​စား နဲ့အငယ်​စား စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​​တွေဖြစ်​ကုန်​ကြတယ်​။နှစ်​စုစလုံးကလည်း ကပြား​တွေ။အရက်​မှာစပ်​ကျား လူမှာကပြားတို့ထုံးစံအတိုင်း ထက်​​တယ်​ ​ပေါက်​​မြောက်​တယ်​။
ဥပဒေဆိုတာတွေ human rights ဆိုတာတွေက ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိသေးဘူး၊ အဲဒါတွေထက် တစ်ဘက်သားကို စာနာစိတ်ကသာ ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ပိုပိုနားလည်လာတယ်။
July 14, 2018 July 14, 2018 drkokogyi
လင်မယား ဖြစ်နေရင်တောင် မိန်းမ စိတ်မပါဘဲ လင်က လိင်ဆက်ဆံရင် ဆက်ဆံတဲ့လင်က မုဒိမ်းမှု မြောက်တယ်) အဲဒါကို လက်ခံရင်တော့ တဘက်မှာ free love ဆိုတာကို ခွင့်ပြုမှ ဟန်ချက်ညီမယ်။ မိန်းမ စိတ်ပါမှ ဆိုပြီး ယူဆတယ်။ တစ်ဘက်မှာကျ ယောကျာ်းက တခြား မိန်းမ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင်တော့ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ ပြောရော။ အဲဒါဆို မမျှတော့ဘူးလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… ကိုယ်က စိတ်မပါလို့ သူ့ကိုမဆက်ဆံရင်၊ သူ့ကိုကျ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆက်ဆံရဘူးလို့ တားဖို့ ဘယ်သင့်မလဲ။ သူဟာ လိင်စိတ်ဖြစ်လာရင် တခြား စိတ်ပါနေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံချင် ဆက်ဆံမှာပေါ့။ ဒီတော့ တစ်ခုကိုကျ လက်ခံပြီး တစ်ခုကိုကျမှ ဖောက်ပြန်တယ်တို့ပြောရင် မမျှဘူးလို့ တွေးမိတယ်။
IF only R2P & ICC really materialize, Bama Buddhist PATRIOTISM or SUPREMACIST policy would be demolished စစ်တပ်ကို အမေရိကန်က ရိုက်ချိုးပြီးတော့ မနေနိုင်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြမှ ဂျပန်ပြည်မှာ စစ်ဝါဒ ပျောက်သွားတာ။ ဗမာပြည်မှာတော့ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်မယ့်လူ မရှိတော့ စစ်ဝါဒက တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့တော့ ကျန်နေတာ
Nazi Germans’ PATRIOTISM & HATRED ON JEWS was also demolished by ALLIED FORCES. There were allegedly numerous rape cases on German ladies by US & Russian soldiers. That incidence broken the WHITE SUPREMACIST SPIRIT of the Nazi Germans.
ဦးအောင်ခင် @ VOA Interview about7July ။ ။ အဲဒီ သဘောပေါ့။ သူတို့က မဟုတ်တာ လုပ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီနေရာမှာ ရှက်ရင်ရှက်လာမှာပေါ့။
ဂျပန်ပြည်မှာ ယူနီဖောင်း မဝတ်ရဲသလို။ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်က ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ မြို့ ထဲ မလာရဲတော့ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဂျပန်ပြည်မှာ စစ်တပ်က ဗိုလ်ကျလိုက်တာ တပြည်လုံး ချွတ်ခြုံကျပြီးတော့ အကုန်လုံး ပြာပုံဖြစ်သွားတဲ့ ဘဝရောက်သွားတာကို။
စစ်တပ်ကို အမေရိကန်က ရိုက်ချိုးပြီးတော့ မနေနိုင်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြမှ ဂျပန်ပြည်မှာ စစ်ဝါဒ ပျောက်သွားတာ။
ဗမာပြည်မှာတော့ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်မယ့်လူ မရှိတော့ စစ်ဝါဒက တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့တော့ ကျန်နေတာ။
၁၈၇၂ ခုနှစ် ပန်းသေးတော်လှန်ရေး
ဆရာ ​ဇော်​ကရီယာ(စစ်​​တွေ​ကောလိပ်​ ရုက္ခ​ဗေဒ ဌာနမှူး​ဟောင်း) ဦး​ဆောင်​ နာမာဇ်​ဖတ်​​နေ​သော တချိန်​က rso ၏ ​တောတွင်းစခန်း တ​နေရာ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း – ဒေါ်ခင်မေသန်း နိုင်ငံတခုလုံးကို အပိုင်စား စိတ်ဓာတ် သွင်းထား
drkokogyi on လူမျိုးတုံးသတ်​ဖြတ်​ဖို့အစို…
drkokogyi on အတွေးအခေါ်ရှိမှဖတ်ပါ
drkokogyi on I think it is justastaged-sh…
drkokogyi on Terrorist Wirathu’s conn…
drkokogyi on ကျုပ်တို့လည်း…..ဆရာ့လို…
အဖြစ်​မှန်​က လူမျိုး​ရေး ဘာသာ​ရေး မုန်းတီး ခွဲခြား ဖိနှိပ်​မှု အရင်းခံ​ကြောင့်​ စစ်​တပ်​က ဦး​ဆောင်​ပြီး ရိုဟင်​ဂျာလူမျိုးတုန်းသတ်​ဖြတ်​​နေမှုကို ဗမာမျိုးချစ်​အစွန်း​ရောက်​​တွေအလိုတူအလိုပါ အား​ပေး​ထောက်​ခံ​နေကြတာ
မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာသံရုံး ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက် ဆွေးနွေး
ဤသစ္စာ စကားကြောင့် အာဏာရှင် စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရစေသတည်း
မြန်မာ စစ်တပ်မှာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အထူးရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံ ခဲ့သူကတော့ ဗိုလ် ချူ ပ်ကြီးသူရရွှေမန်းဘဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရျိလည်းဆက်ဆံနေဆဲပါဘဲဒါကြောင့်သူရရွှေမန်းနာမည် ဟာ အမေရိကန် အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးရဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် စာရင်း မှာပါဝင်နေပါတယ်။